SHIR AY JAALIYADA OGAADEENYA EE MINNESOTA KA YEESHEEN XADGUDUBYADA MAAMULKA HARGEYSA
Maxamed Axmed Cabaas
Minneapolis, Minnesota Dalka Maraykanka.
Waxaan lawada soconaa waxyaabaha ka dhacaya Gobolada Waqooyi Galbeed ee dhanka ka ah dadyawga Soomaalida ah ee ka soo jeeda Gobolada kala duwan ee Soomaalidu degto. Hadaba cadho iyo dareen ka dhashay awgeed ayaa waxaa maanta oo bisha December 13, sanadka 2003 isugu timid Jaaliyada Soomaalida Ogaadeenya ee Minnesota. Shirku wuxuu ka dhacay Hool ka mida Hoolashada Sabathani Community Center oo ku yaal dhinaca konfureed ee Magaalada Minneapolis. Waxaa ka soo qayb galay shirka dad aad u badan oo boqolaal gaadhaya iyagoo muujinayey sida ay uga xun yihiin falalka foosha xun ee beni’aadami nimada ka baxsan ee Maamulka Hargeysa ee Riyaale Kaahin madaxda ka yahay ay kula kaceen dadka shacabka ah een waxba galabsan ee Soomaalida Ogaadeenya.
Dadka Shirka ka soo qayb galay kana hadlay ayaa waxaa ka mida ahaa aqoonyahniin, odoyaal, mas’uuliyiinta Jaaliyada, culimaa’udiin, iyo waxgarad dhamaan ka soo jeeda Soomaalida Ogaadeenya. Dadka Shirkan ka soo qayb galay ayaa ka kala yimid magaalooyin kala duwan oo ku yaal Gobolka Minnesota ee Dalka Maraykanka. Kulanka ayaa ujeedadiisu ay ahayd sidi looga wada tashan lahaa dhibaatadi ugu dambaysay ee uu Maamulka Hargaysa ka taliya ku xidhxidhay dad ka mida shacabka Soomaalida Ogaadeenya oo ku sugnaa Magaalooyin ka mida Gobolada Waqooyiga Soomaaliya. Maraan u kuurgalayey bal inaan xan dhagaysto dadka goobta isugu yimid ka hor intii uusan shirku bilaaban waxyaabaha ay ku sheekaysanayeen si koox koox ah ayaa waxaa ka mida ahaa waxyaabihi dhagahayga ku soo dhacayey; “Maxaa ku kalifay maamulka Hargaysa inuu cadaawada intaa la’eg muujiyo?” “War nimanku tala xumaa soo iyaga nabadi yarayd ee ay haysteen halis iska galiyey.” “Waligoodba Itoobiya ha raali galiyaan, cadaawada ay Soomaali oo dhan ula badheedheen waxba Itoobiya uga qaban mayso markay jawaabteeda helaan.” “Dadwaynaha reer Waqooyigu ma in maamulkoodu uu sidaa ula dhaqmo dadka walaalahood ah ayey raali ka yihiin?” “Shacbiga Ogaadeenya dheef badan kuma qabo Waqooyiga Soomaaliya ee iyaga ayaa dheef ku qaba.” “Colaada lagaga baaqay Hargaysa bal nikay u daraato aan aragno.” “Dadka reer Ogaadeenya muda dheer ayuu ku dulmanaa laguna dhiigmiiranayey Hargaysa, in la kala miirmo ayaa dani ugu jirtaa dadka Ogaadeenya”, iyo hadalo kale oo ay cadho la muuqatay oonan halkan ku soo wada koobi karin.
Shirki ayaa furmay waxaana hadalo isugu jira taariikh, gubaabo, iyo wax is farid ka soo jeediyey qaar ka mida dadwaynihi shirka yimid, mas’uuliyiinta Ogaadeen Ameerican Community, culimada qaar ka mida, aqoonyahanada, iyo odoyaasha Jaaliyada intaba. Dood dheer iyo wada tashi ay Jaaliyadu yeelatay ka dib waxay isla meel dhigeen lana go’aansaday qodobadan soo socda:
1.In gudi loo xilsaaro isku soo duba rida sidii looga hortagi lahaa dulanka ka socda Hargaysa.
2.In aragti midaysan laga yeesho wax alaale wixii dulmi ah ee lagula kaco shacabka Soomaalida Ogaadeenya noocuu doono, iyo ciday ka timaadana laga hortago aan loona dul qaadan hadda wixii ka dambeeya.
3.In shacabka Soomaalida Ogaadeenya looga digo khataraha lagu waxyeelaynayo ee goor walba kaga imanaya Maamulka Haragysa.
4.In lacagaha Xawaaladaha qaraabooyinka loogu diro Gobolada Waqooyi la joojiyo loona sheego dadka loo diro inay tagaan deegamadoodi ay ku dhasheen iyo Gobolada Soomaalida kale een lagu dulmiyeynin. Sababtoo ah waxaa lacagta adage ee la diro ay gashaa Gobolada Waqooyi ee lagu dulaynayo naftooda iyo maalkooda.
5.In dhaqaale uu gudigu ku hawl galo ay Jaaliyadu iska qaado.
6.In Maamulka Hargaysa looga digo inuu sii daayo dadka aan waxba galabsan ee uu xabsiyada ku hayo. Isla markaana uusan gacanta u galin Guumaysatada Itoobiya.
7.In saxaafadaha Soomaalida, kuwa caalamka, Dawalada Maraykanka, iyo ururda xuquuqal iinsaanka lala socodsiiyo falalka dulmiga ah ee ay ku heshiiyeen Maamulka Hargaysa, iyo Xukumada Itoobiya in ku cabudhiyaan shacabka Ogaadeenya.
Qodabadan markii la ansixiyey ka dib ayaa waxaa goobti kulanka waxaa lagu magacaabay sagaal ruux oo gudi ah. Si buuxda ayaa laysagu raacay sagaalka ruux ee la soo magacaabay, xilkooduna noqonayo sidan soo socota:
1.Inay si joogta ah uga war hayaan waxyaabaha dhanka ka ah shacabka Ogaadeenya ee ka socda Gobolada deriska la ah oo ay ugu horayso W/Galbeed.
2.In Gudigu uu sahamo ku kala bixiyo Gobolada iyo deegaamada xadka la leh Ogaadeenya oo aysan ku jirin W/Galbeed si xidhiidh ganacsi loogala xaajoodo oo shacabka Ogaadeenya uu la yeesho Goboladaas. Meelaha la carabaabay waxaa ka mida ahaa; Boosaaso, Muqdisho, Jabuuti, Kismaayo, iyo Mambaasa.
3.Gudigu wuxuu la xidhiidhi doonaa Ganacsatada iyo Maamulada ka jira goobaha aan kor ku soo sheegnay isagoo kala xaajoonaya in xidhiidh ganacsi iyo mid walaalnimo uu dhex maro shacabka Ogaadeenya iyo Gobolada ay booqan doonaan.
4.Gudigu waa inuu warbixino ku aadan hadba wixii loo baahdo iyo wixii soo kordhaba u soo bandhigaa Jaaliyada.
Runtii anigoon soo koobaya waxyaabihi ugu waawaynaa ee kulanka ayuu kulanka wuxuu ahaa mid ka duwan kulamadi ay Jaaliyadu yeelan jirtay. Sababtoo ah wuxuu ahaa mid ay si xamaasad ay cadho ku jirto ay uga wada hadlayeen arimaha uu ku kacayo Maamulka Hargaysa. Waxaad moodaysay in kalsooni badan ay ku jirtay dadk ashirka joogay marka laga eego baahida uu shacabka Ogaadeenya uu u qabo u sifrida G/W/Galbeed.
Waxaa somalitalk soo gaarsiiyey: bulhan2010@hotmail.com